"Education for Myanmar Youths": To be or Not to be ( ဆေးကျောင်းသား ပြသာနာ)
: General Discussions, Info - Various Professions
Posted by Kay Thwel at 9:12 PM
ရေးထားလေး ကောင်းတယ်။ ကျွန်တော့် အသိထဲမှာတောင် တစ်ယောက်က ဆရာဝန် ပြီးတော့ ပြည်တွင်းမှာမလုပ်ချင်တော့ ပြည်ပကိုထွက်လာ.. အလုပ်ကလည်းမရ... ပြန်လည်းမပြန်ချင်တော့ စာရင်းကိုင်သင်တန်းတက်ပါတယ်.. နှမျောစရာပါ
နောက်တစ်ယောက်ကတော့ ဆရာဝန်လိုင် မမှီခဲ့လို့ ကွန်ပျူတာတက်ပြီး အခုတော့ အဆင်ပြေနေပါတယ်။
ပြောသွားသလို ကျောင်းတက်တုန်းသာမက ကျောင်းပြီးရင် ဆိုတဲ့အတွေးကို ပန်းတိုင်အဖြစ်ထားသင့်ကြပါတယ်။
၁၀တန်းအောင်စမှာ ဘာလုပ်သင့်တယ်တိုတဲ့ ရှေ့အနာဂတ်ကြိုမြင်ဖို့ခက်တဲ့ တိုင်းပြည်ဖြစ်နေတာလည်း ပါတာပေါ့လေ။
ရေးထားတာတွေ တော်တော်မှန်တာဘဲ။ နိုင်ငံခြား ထွက်တာကတော့ မြန်မာပြည်ကဆရာဝံတွေတင် မဟုတ်ဘူး။ india တို့ pakistan တို့ bangladesh တို့က သူတွေလဲ တကမ္ဘာ လုံးသွားနေကြတာပါဘဲ။ england ပေါက်ဆရာဝံတွေလဲ newzealnd ကိုသွားလုပ်ကြတာတွေ့ရတယ်။
မြန်မာပြည်ကဘွဲ့ရပြီးရင် အနဲဆုံးတော့ 2-3 years အနောက်နိုင်ငံ experience ယူဖို့လိုမယ် ထင်တယ်။ ဒါပေမဲ့လဲ ထွက်ပြီးရင် မပြန်ကြတာတော့ ကြောင့်ပေါ့လေ။ အပြစ်တော့မပြောသာပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ထူးဆန်းတာက အခုနောက်ပိုင်း government scholar တွေကို passport အစိမ်း နဲ့သက်တမ်း သုံးနှစ်ပဲပေးပေမဲ့လဲ တော်တော်လည်ကြတယ်။ မြန်မာပြည်ခနပြန်ပြီး passport အနီနဲ့ပြန်ထွက်လာကြတယ်။
ကောင်းမွန်တဲ့ post ပါ။ cousin တွေထဲက အဲဒါတက်တဲ့လူတွေကို မေးမိပါတယ်။ ပြီးရင် ဘာလုပ်ကြမှာလဲ လို့။ မြန်မာပြည်ဟာ ဥခွံထဲက မထွက်သေးဘူး။
ဆရာဝန်ရောဂါကြောင့် အခြား ဘာသာရပ်တစ်ခုမှာ စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့ ထူးချွန်တဲ့ မျိုးဆက် ခါးပြတ်ရခြင်းကို The Voice ဂျာနယ်မှာ ရေးထားတာ လွန်ခဲ့တဲ့ (၃) နှစ်ကျော်က ဖတ်ရပါတယ်။
ဆေးဝင်မှ လူတော်လို့ သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းအတွက် အလွဲလွဲအချော်အချော်ဖြစ်လာတဲ့ မျိုးဆက်အကြောင်း အခု ရှင်းပြသွားသလိုပဲ ပြောပြထားတဲ့ ဆောင်းပါးပါ။
မြန်မာပြည်မှာ ဆေးပညာနဲ့ ဘွဲ့ရပြီး ဆရာဝန်ဆက် မလုပ်ဘဲ တခြားစီးပွားရေးတွေမှာ လုပ်နေတာ အများကြီးပါ။
အေဂျေခရိုနင်ဟာ ကမ္ဘာကျော်စာရေးဆရာပါ။ ဒါပေမယ့် သူဟာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မျှမျှတတလုပ်နိုင်ရင်တော့ သင်ထားတဲ့ပညာ၊ နိုင်ငံတော်စရိတ်နဲ့ လူမှုအရင်းအမြစ်တွေ နည်းနည်းတော့ ကာမိမယ် ထင်ပါတယ်။
စကားမစပ် မြန်မာပြည်က သိပ္ပံတွဲနဲ့ ဘွဲ့ရသူတွေ ဖိလစ်ပိုင်မှာ ဝင်ခွင့်ဖြေပြီး လေးနှစ် ထပ်တက်ရင် ဆရာဝန်ဘွဲ့ရနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားရင် စုံစမ်းကြပါ။
ဆရာဝန်ဖြစ်ပြီးသား သူတွေအတွက် Genetic engineering က မခက်တော့ဘူးလို့ ကျွန်မတော့ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည်က ဆေးကျောင်းတွေမှာ ဆဲလ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လောက်သင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာတော့ ကျွန်မမသိဘူး။ ဒီမှာ ၁၂ တန်းပြီးရင် Biotechnology ဆိုတာ အမှတ်မီရင် တက်လို့ရတယ်။ ၁၂ တန်းက Biology မှာ Genetic engineering နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တော်တော်များများ Research တွေလုပ်ရပြီး Assignment တွေတင်ရပါတယ်။ ၁၂ တန်းမှာတောင် Genetic engineering and mordern biotechnology ကို ကောင်းကောင်း သင်ရပါတယ်။ Recombinant DNA အကြောင်းကို အသေးစိတ်သင်ရပြီး Assignment အတွက် ဓါတ်ခွဲခန်းမှာ DNA ရအောင် လုပ်ပြီး Reseaerch လုပ်ရပါတယ်။ ကျွန်မထင်တယ် ဆေးကျောင်းတက်တဲ့သူတွေဟာ ဒီက ၁၂ တန်းလောက်တော့ Genetic engineering အကြောင်းကို နားလည်လိမ့်မယ်လို့ ထင်တယ်။
ကျွန်တော်လဲ Mgmg ပြောတာကိုထောက်ခံတယ်ဗျ
Mgmg နဲ့ ဒုတိယ anonymous ပြောသွားတာကို ကျနော်လည်း လက်ခံပါတယ် ။ ဘယ်ပညာမဆို တကယ် ဖိ၂စီး၂နဲ့သင်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ တကယ်အချိန်ပေးရပါတယ် ။ နောက်ပြီး သင်ယူစရာတွေက မပြီးနိုင်တော့ပါဖူး ။
ကျနော့်အမြင်ကတော့ ဆေးကျောင်းက စာများတယ်လို့ ပြော၂နေကြတာက ဆေးကျောင်းကဘွဲ့ရဖို့က ၆ နှစ်တက်ရတာအတွက် ၊ တခြားဘွဲ့တွေနဲ့စာရင် ကျောင်းတက်ရတဲ့အချိန် ပိုများလို့ ပြောတာဖြစ်ပါမယ် ။
နောက်တချက်က ကွန်ပြူတာတို့ အင်ဂျင်နီယာပိုင်းတို့ဆိုရင် fundamental concepts တွေကို မှတ်ထားနိုင်ရင် နောက်ပိုင်းဟာတွေကို ကိုယ့်ဘာသာဆက်ပြီး apply လုပ်လို့ရတာမျိုးက ၊ ဆေးပညာပိုင်းထက် ပိုများတယ်လို့ မြင်ပါတယ် ။ ဆေးပညာမှာတော့ ဘယ်လို ရောဂါလက္ခဏာဆို ၊ ဘယ်လိုဆေးနည်းနဲ့ ကုရမယ် ဘာညာဆိုတာတွေကို အမြဲမှတ်ထားရတာမျိုးဖြစ်နေတော့ ပိုပြီး မှတ်ရတာများတဲ့အတွက် စာများတယ်လုိ့ ပြောကြတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။
I amajunior doctor from MDY and I just got my degree on 3/2009
I haveaplan to sit for USMLE
But you know I didn't have my grading certificate and only I had is Final medical diploma(MBBS)
How can I continue to makeasubmit for step 1 of MLE.
They say we need these two things and will verify with any way to approved our educational status. ကျေးဇူးပြုပြီး အကြံဥာဏ်လေးပေးပါ တစ်ခြားသူတွေကော အမှတ်စာရင်းမရှိဘဲနဲ့ ဘယ်လိုလျောက်သလဲ